Bitany tany 2016 bauma Shina Vavolombelona Nahoana XCMG ny "Tompon-daka tsy hita maso" milalao "Inventive" Chess - China Shanghai Nitsangana Tamin'ny Maty
Pitaovana & Storage
nitsangan-ko velona Care
nitsangana Tamin'ny Maty Events
Bitany tany 2016 bauma Shina Vavolombelona Nahoana XCMG ny "Tompon-daka tsy hita maso" milalao "Inventive" Chess
Ny navoaka date: Feb-03-2017 Vakio ny isa: 241
Araka ny ambony injeniera fitaovana hetsika, "bauma Shina" (Iraisam-pirenena Trade Fair for Fanorenana milina, Building Material Machines, harena ankibon'ny tany Machines sy Construction Fiara) Tsy vitan'ny hoe maneho izao tontolo izao amin'ny teny sinoa tsena vokatra fikarohana ka lasa mifototra amin'ny Shinoa mpanjifa traikefa fa koa milaza izao tontolo izao fa isika shouldering ny andraikitra amin'ny hoavy manosika amin'ny fampandrosoana ny teknolojia, ny fahendrena sy ny inventiveness. Ao amin'io kianja izay fitaovana goavam-be eran-fanorenana mpifanandrina amin'ny tsirairay, XCMG, toy ny mpitarika ny indostria vaovao fampandrosoana toromarika sy ny fironana amin'ny entanao rehetra teo aloha, ny fanambarana ihany koa ny manome fomba ofisialy - "Inventiveness, orinasa mpamokatra entana ho anareo manan-tsaina". Mba tsara mandika ny foto-kevitra, afa-tsy nikarakara endriny sampahom-boaloboka lehibe mahagaga Show, XCMG debuts ihany koa ny fianakaviana sy ny faritra ny singa fototra - "tompon-daka tsy hita maso" eo amin'ny milina fitaovana.
Manan-tsaina, angovo-mamonjy sy fampisehoana no maotera sy ny singa fototra faritra ny XCMG hanaraka ny handrava farany ambony ambany fomba ara-dalàna vaovao. "Fitaovana fanorenana orinasa ao Shina mamaha 90% ny olana. Ny fanalahidy dia ny handresy ny 10%. Izany dia toy ny fihanihana ny farany zato metatra vitsivitsy an-tendrombohitra Everest. Mila kokoa ny hery, vola, kokoa ny fahendrena sy ny maro hafa talenta. "Toy ny" nihanika Tendrombohitra Everest Tsangan-kevitra "naroson'ny Filoha & Sekreteram-Party Komity Wang Min, XCMG dia nanomboka hametraka ny" inventive "chess ny fototra faritra sy ny singa talohan'izay. Anisan'izany, XCMG Hydraulics Co., Ltd., ny ampahany & singa orinasa naorina tamin'ny 1975, dia miankina amin'ny zavatra hafa tsy omby efa-polo taona ny asa voatokana hilalao chess ary manao hydraulic singa XCMG manolotra manerana an'i Shina, dia ho aondrana any batches ho efa ho 20 mahery amin'ny firenena sy ny faritra toa an'i Eoropa, Amerika, Rosia ary Japana miorina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny avo-end vokatra nasongadina ny faharanitan-tsaina, ny angovo famonjena sy ny fampisehoana, hamirapiratra eo tena zana-kazo amin'ny Global samihafa fanorenana milina, tontolo iainana ny fanadiovana milina, fitrandrahana harena ankibon'ny tany milina, fitaovana sambo sy ny toy izany ary farany dia lasa "tompon-daka tsy hita maso" nitarika ny fampandrosoana ny tsy miankina sy ny singa fototra anjara orinasa.
"Valve" vokatra avo-mamaky fomba vokatra farany amin'ny "faharanitan-tsaina"
Araka ny hevitry ny hoe "manan-tsaina orinasa mpamokatra entana" fohaziny, mandeha ho azy sy nomerika manan-tsaina teknolojia ireo dia tonga nirohotra ampiharina amin'ny orinasa mpamokatra entana indostria, izay tsy vitan'ny hoe bebe kokoa miantoka ny kalitaon'ny stableness ny vokatra ary manatsara hetsika fahombiazana, fa manokatra vaovao lalana ho an'ny vokatra mampitovy famongorana sy ny marika sarobidy fanitarana. By mafy mitantana ny fahafahana, sy singa fototra faritra ny XCMG hampifantoka ny fikarohana sy ny fampandrosoana any amin'ny avo-hydraulic singa orinasa mpamokatra entana farany an-tsaha. Rehefa nahazo roa XCMG orinasa Eoropeana - AMCA avy any Holandy sy FT avy any Alemaina, miampy fametrahana ny Eoropeana Research Center ny XCMG, ny "tsy miankina manerana ny mpandrindra + mitondra zava-baovao" R & D ecosphere ny fianakaviana manontolo ny hydraulic singa dia maka endrika.
Taorian'ny dedusted ny 15 segondra eo amin'ny rivotra fandroana, ianao miditra ao amin'ny akaiky-karazana atrikasa tsy tapaka-mari-pana. Na dia manamafy Rolling ny milina ao amin'ny sofina, mijery ny manodidina, fa tsy maro hetsika manokana dia mety ho hita, satria dia omena miaraka amin'ny tena mandeha ho azy famokarana ambaratonga. Ambony kokoa manolo fitaovana fikarakarana ny mpiasa maro an'isa. Maro ireo mpiasa an-toerana na poloney vokatra eo ambany jiro na hanao fitiliana fitaovana tsara mba "fitiliana" vokatra toy ny dokotera ... tampoka rehetra, dia mahatsapa toa ka tsy mpanamboatra vokatra indostrialy, fa nanimba zavakanto. Izany no singa hydraulic famokarana XCMG taranak'i Hydraulics Co., Ltd. Various hydraulic valves showcased ao amin'ny ara-drariny dia teraka tamin'ny famokarana ity tsipika.
Mba hahatratrarana-manodidina rehetra fandrosoana in hydraulic tsaha, tamin'ny 2012, XCMG naka zavatra sy nahazo eoropeanina roa malaza hydraulic mpanamboatra - FT avy any Alemaina sy Holandy AMACA avy; tamin'izany andro izany, XCMG ihany koa ny vola 360 tapitrisa Euro mba hanorina Eoropeana R & D afovoan-tany Alemaina, ary mifantoka amin'ny singa fototra sy manan-danja toy ny hydraulic teknolojia miditra tsimoramora, paompy, sy ny manan-tsaina maotera fanaraha-maso. Under izany mafy fisehon'ny, XCMG Hydraulics namorona nikatona eran-mirindra, mifanohitra izy mifandray ary mifanohitra izy nanohana fiaraha-miasa fifandraisana amin'ny FT avy any Alemaina, AMACA avy any Holandy, Eoropeana Research Institute sy ny toy izany, mba hiezaka mafy mafy ady hery nandresy avo-end fototra hydraulic faritra sy ny singa. Ao tsara tarehy ity, elektrika Rotary lafika miditra tsimoramora dia vokatry nahavita ity ecosphere fikarohana sy ny fampandrosoana.
Amin'ny maha-za-draharaha injeniera ao Eoropa R & D Center, Doctor Fei Kaoyin, mba hamaha swinging hetsika ny fanentanana an-tsary, nanatevin-daharana amin'ny "CES Optimization" Project, izay mikendry manokana mba hanatsarana operability, angovo-mamonjy zava-bitany sy ny stableness. Ahoana no vaovao farany ny lafika hetsika? Doctor Fei Kaoyin voalamina indray mandeha fahitana fihaonambe ho imbetsaka. To maturely hisolo hydraulic efa misy soso-kevitra amin'ny tolo-kevitra fanaraha-maso ny herinaratra, dia niady hevitra mafy ny mpiara-miasa aminy. Tamin'ny farany, dia nivoaka manerantany mpanao voalohany buffer asa izay nampiasa jiro mitanila fanampiana miditra tsimoramora mba hahatsapa swinging hetsika ny fanentanana an-tsary. Tantara herinaratra Rotary lafika miditra tsimoramora milamina kokoa sady mandimandina swinging nandritra ny asa, izay vao mainka stably fandrosoana vaovao kokoa amin'ny vokatra sy ny teknolojia ny XCMG.
Mirindra toy izany ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny toe-javatra isan-karazany nanerana ny vokatra miditra tsimoramora hydraulic XCMG fianakaviana. Tamin'ny 8 andro, dimy valves dia tsinjaraina, roa karazana iray efa mivory, ary napetraka dia Nanandrana ... Izany no fikarohana sy ny fampandrosoana ankehitriny fahaizany ny CES ekipa ho hydraulic valves ny XCMG. Ny tetikasa dia nitondra ny Eoropeanina Research Center ny XCMG ary tohanan'ny XCMG Heavy milina, XCMG Hydraulics sy XCMG Institute. Efa-arty mandrindra ny fikarohana sy ny fampandrosoana no tanteraka voalohany mba hydraulic valves ny XCMG dia be kokoa amin'ny vokatra masontsivana, toy ny vola, lanja sy ny valin ny fotoana, ary ny fampisehoana tondro, toy ny fanaraha-maso, ny faharanitan-tsaina sy ny zavatra stableness. Ao amin'ny trano rantsan-kazo ho an'ny fototra faritra sy ny singa ao XCMG, isan-karazany vokatra foana lazaiko aminareo fa hydraulic valves ny XCMG izay outshine ny "faharanitan-tsaina" dia lasa "vaovao trompetra" izay "feno hydraulic rafitra vahaolana mpamatsy" dia afaka mandeha eran-tany, toy ny APVM mavesatra saro-pady maro tarika miditra tsimoramora sy ny boky fampianarana fiovana miditra tsimoramora izay mandroso indrindra fa eran-malaza tsena mpanamboatra, ary afaka hanohitra 250.000 fiantraikany fitsapana sy 20.000 commutation fitsapana, XSV feno saro-pady maro tarika miditra tsimoramora ny izay mampitabataba-maimaim-poana-javatra mifanohitra fiantraikany mihoatra ny 1.000.000 in- sy ny Eoropeana ary tamim-pahendrena-nanamboatra-in-China APV vondrona maro miditra tsimoramora.
Manaova "mandalo maitso" miaraka amin'ny "angovo fiarovana"
Fitaovana orinasa mpamokatra entana no fototry ny fampandrosoana ara-toekarena-pirenena ary koa ny zava-dehibe antoka ny indostria sy ny teknolojia vaovao fanatsarana ny orinasa isan-karazany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny milina orinasa orinasa mpamokatra entana efa nitsangana manaitra, rafitra orinasa efa foana izay hahatonga lafatra ny fanatsarana sy fanavaozana sy ny teknolojia no kokoa indrindra. Na izany aza, manaraka ny fanjifàna angovo sy ny fandotoana efa maro sy miavaka kokoa. Indrindra indrindra, adaption ny fepetra takiana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny tontolo iainana dia tokony ho raisina ho fiheverana ny famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana, ny zana-kazo amin'ny fanorenana lehibe milina, ka lasa-damaody ny fikarohana sy hampitombo tontolo iainana-namana vokatra. Izany no anjara maintsy mampihatra ny teknolojia sy ny singa izay mahomby kokoa sy ny heriny-mamonjy. Amin'ny maha-voalohany-kilasy ao an-toerana anjara sy ny singa orinasa, XCMG Hydraulics dia hanolo-tena haingana ny vokatra ny fikarohana sy ny fampandrosoana dingana, ny fampiharana fahazavana lanja ny teknolojia ny vaovao farany ny hydraulic singa sy ny miezaka mba hanolotra mpanjifa kokoa sy ny heriny-mamonjy hydraulic rafitra vahaolana sy ny teknolojia fanohanana .
"Amin'ny maha-fahazavana lanjan'ny fifaninanana vokatra nalaintsika taona maro mba hamoronana, dia hampitombo bebe kokoa maintsy ankapobeny fampisehoana fanatsarana ny afo milina. Ao amin'ny hoavy, isika koa hanomboka ny fahatelo taranaka sy ny fahefatra ankapobeny fahazavana lanjan'ny vokatra mba hitondra kokoa nety tsara angovo fampisehoana. "Izany fahazavana lanjan'ny fifaninanana vokatra voatonona Lehiben'ny Mpamorona Zhang Qingkou ho vokatry ny XCMG Hydraulics no aluminium telescopic sodina debuting in bauma ara-drariny izany. Io no tranga voalohany any Shina. Rehefa vokatra toy izany natolotra noho ny voalohany, mpanjifa rehetra dia Nampiaiky volana ny lanjany teknolojia hazavana tsy an-kanavaka izay mahatonga azy io azo natao ny iray tanana. Hery avo aluminium firaka no natsangana ho an'ny ampahany lehibe toy izany, izay vokatry ny lanjany dia kely kokoa noho ny tsy tapaka 2/3 Stainless vy fantsona. Ankoatra izany, ambonin'ny manokana fikarakarana sy ny fanohanana teknolojia-mirona teknolojia ampiharina koa. Noho izany, io vokatra ambony dia omena miaraka amin'ny fananana anaovan'ireo sy ny hamafin'ny ambonin'ny, ny fahaizany dia mirona Loading kokoa, ny fiainana sy ny asa fanompoana no kokoa. Ankoatra izany, dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny hery fanjifana ny tena endriny ihany koa fa maivana sy malefaka kokoa, dia toy izany no tanteraka ny toe-quo hanaisotra afo ao an-toerana izay milina mila miantehitra amin'ny aluminium nafarana firaka sodina.
Fampiharana ny ampahany mazava sy singa fototra lanja ny teknolojia zava-dehibe ny fiarovana angovo fampisehoana ny tena endriny. Raha ny fantatsika, varingarina hydraulic vokatra rehetra, toy ny fanentanana an-tsary isan-karazany, sy ny paompy loaders kamiao, no tantara angovo-mamonjy vokatra vokarina manokana natao, ary mifototra amin'ny lova ny fikarohana teo aloha sy ny orinasa mpamokatra entana, sy ny traikefa fanorenana toetra mampiavaka ny tena endriny. By foana manamafy rafitra Optimization sy fandalinana ny mazava lanja fampiharana, ny orinasa mampiasa hery avo-tantara fitaovana mba hanolo fitaovana nentim-paharazana varingarina mba ho vokatra tsara azo omena amin'ny milina sy ny fampisehoana ara-teknika. Noho izany, raha oharina amin'ny vokatra tsy tapaka, lanjan'ny tanteraka varingarina dia 20% kely na ambony. Ny orinasa dia mitondra fampandrosoana ho avy tari-dalana mazava lanjan'ny vokatra.
Mandra-pahatongan'izany, remanufacturing teknolojia naranty amin'ny ampahany sy ny trano rantsan-kazo ihany koa ny singa-dehibe ny fanorenana "mandalo maitso", toy ny avo velocity oxy-tsolika sy ny ranon-dra electrolyte Nikosokosoka. Amin'izao fotoana izao, orinasa remanufacturing dia nivoatra tsikelikely ho fantsona vaovao izay fitaovana fanorenana orinasa dia mavitrika trandrahana sy miezaka ary koa ny iray amin'ireo teknolojia fototra izay fizarana ny faritra sy ny singa fototra ao XCMG mandany ny hanana sisa soatoavin'ny vokatra ho araka ny tena. Mba ho takatsika tsara ny vokatra sarobidy fahaterahana indray, ny namany, ka indrindra fa ny remanufacturing sampana mba hifantoka amin'ny fikarohana ny hydraulic varingarina remanufacturing sy manan-danja fikojakojana sy fanamboarana teknolojia mamorona rafitra remanufacturing raharaham-barotra sy ny teknolojia fikarohana rafitra. Miaraka be remanufacturing mahafantatra-ny fomba breakthroughs sy ny fampiroboroboana fampiharana vokatra ihany, dia asaovy mandresy ny lehibe-tonnage remanufacturing tetikasa ny goavana vy orinasa sy ny zava-bita ny baiko ho an'ny fikojakojana ny American-dehibe cylinders, dia Voaporofo àry fa ny lahatsoratra-tsena dia lasa hafa raharaham-barotra fiakaran'ny fandrosoana hevitra ny orinasa.
Jereo ny fampisehoana amin'ny "Chip", 8000 ora "mety levona" fanompoana ny fiainana
Toy ny fitaovana fanorenana niasa foana ivelany sy mifaninana mafy ny toe-piainana toy ny fasika rivo-doza sy ny hamandoana, dia bebe kokoa dia miankina amin'ny ny vokatra azo itokisana. Amin'ny teny hafa, na inona na inona izay fironana indostrialy no fampivelarana ny teknolojia, stableness sy azo itokisana ny vokatra dia tsy maintsy ho foana ny foto-kevitra voalohany tokony manaraka. Izany no foto-kevitra ihany koa ny voalohany niaraka niatrika ny fanorenana mpanamboatra fitaovana sy ny fanohanana anjara mpamatsy. Araka ny volamena fari-"nandroso ny teknolojia, mety levona" navoaka, XCMG koa nitondra ny tanjona ny retargeting sy ny refocusing amin'ny teknolojia fototra manan-danja sy fototra sy ny singa faritra. Toy ny fitarihana hydraulic varingarina mpanamboatra, XCMG Hydraulics mahafa-po nametraka taratasy ity fitsipika amin'ny ora 8000 "mety levona" fampisehoana.
"Bang-" Rehefa excavateurs mierona, ka toeram-panorenana iray any Pilbara faritr'i Aostralia dia naresaka indray. Ao amin'io faritra fitrandrahana, akaikin'ny ekoatera sy ny mafana sy maina, ary izay ivelan'ny trano foana hafanana ambony kokoa noho ny 37 °, iray lehibe Super--tonnage excavator no nitarika 8000 consecutively fahadisoana-miasa maimaim-poana ny 8000 ora. Vokany toy izany dia vokatry ny fahazavan 'hydraulic vokatry ny XCMG mamirapiratra ao anatiny. "-Tsiny ny fanompoana malalaka fotoana hydraulic cylinders Shina na dia tsy ho tanteraka sasany iraisam-pirenena kilasy voalohany vokatra. Parts sy ny singa ny XCMG dia 'vatosoa' izahay nihady ao Shina! "Miteny ity fitaovana ity talen'ny faritra fitrandrahana Aostraliana fitaratra, ny hatoky hydraulic varingarina vokatry ny XCMG. "Gem" izy niresaka momba ny hydraulic varingarina ny excavator aseho ao amin'ny trano rantsankazon'i faritra sy ny singa fototra ao XCMG. Nandritra ny fotoana ela, noho ny ambony sy ny fikarohana sy ny fampandrosoana olana sarotra fikarakarana teknika, miampy asa voka fepetra ny tena endriny, excavator avo manana sy ny fepetra ho an'ny cushioning airtightness. Noho izany, toy izany vokatra dia heverina ho "satroboninahitra" eo hydraulic cylinders sy fanavaozam-baovao tsirairay dia eo ambany ifantohan'ny sain'ireo zatovolahy. Boom varingarina ny Super-lehibe-tonnage excavateurs naranty tamin'ity indray mitoraka ity dia ao an-toerana lehibe indrindra-tonnage excavator varingarina fikarohana sy vokarina avy XCMG Hydraulics amin'ny fandinihana ny misy ny teknolojia sy ny fitaovana fototra fahaizany. Amin'ny maha-iraisam-pirenena lehibe mifaninana vokatra ny fototra faritra sy ny singa ao XCMG, fampiharana maromaro vaovao fitaovana, ny teknolojia vaovao sy ny vaovao teknika tsy mizara amin'ny alalan'ny varingarina teknolojia bottleneck ny an-trano faran'izay-goavana excavator fa koa mandresy malalaka fiderana ny tena endriny mpampiasa ao an-trano na any ivelany. Tsy indray mandeha indray ny manome ny tsara indrindra ho vokatra heviny hevitry ny hoe "nandroso ny teknolojia, mety levona".
Ankoatra izany, misy ihany koa ny sasany hafahafa tarehy "vy vokatra" ao amin'ny trano rantsan-kazo, izay ihany koa ny manolotra mafy fanohanana ny "inventive" chess ny "tsy hita maso tompon-daka": io dia ahitana ny telo mitovy tarehy cylinders, ary, nomenay anaram-bosotra hoe "triplet" , dia telo-varingarina manokana sequential telescopic fitaovana; hoisting mifototra amin'ny toetra mampiavaka ny maro-tsehatra telescopic jibs ny vanobe koa samy lorry-tsoavaly, ny vokatra, amin'ny alalan'ny telo-varingarina fametrahana nifandimby, tsy be hoisting Manatsara ny fahafahan'ny tena endriny, fa mandrisika ihany koa ny rafitra sy ny teknolojia vaovao Optimization ny tena toe-lorry- niainga vano; antonony tena Fanidiana, farany-tena Fanidiana sy manontolo-Fizotry ny fanitsiana-tena Fanidiana varingarina farany vita amin'ny alalan'ny 28 tolo-kevitra fanatsarana sy ny fitsapana amim-pahombiazana fahafaham-po chassis no mamily ilain'ny fanorenana milina, hahatakatra teknolojia fandrosoana amin'ny lafiny maro toy ny fitiliana araka ny marina, valiny haingana sy fanompoana ny fiainana ny Fanidiana ny faritra ary fenoy ny banga eo amin'ny singa sy ny an-trano toy izany nohafarana vokatra eo amin'ny fanompoana ny fiainana sy ny azo antoka niteraka nandritra ny taona maro; ara-teknika isan-karazany mampiseho santionany ambonin'ny teknolojia fanodinana, welding teknolojia sy ny teknolojia ara-nofo manta manome fanohanana ny stableness mafy sy azo itokisana ny faritra sy ny singa fototra ao XCMG, izay ahafahan'ny fikarohana teknika fototra ho tonga ny haavon'ny "mety levona".
"Ankoatra hijery hydraulic saha amin'ny teknolojia fanavaozana, handresy iraisam-pirenena fifaninanana sy ambony fanompoana." Na dia fanitsiana ny asa dia nitondra ny vaovao ara-dalàna ny toekarena Shinoa mbola mitohy, fototra faritra sy ny singa ao XCMG fitaovana amin'ny "mafy fanohanana" no niteraka ny inventiveness hiverina ela lasa izay . Amin'ny maha-mpitarika ny avo-end fototra faritra sy ny singa ao Shina, "tsy hita maso tompon-daka" ny XCMG dia maintsy "tonga teo an-tampon'ny Tendrombohitra Everest", mandresy io avo-end fandrosoana "inventiveness chess", ary vao mafana manomboka amin'ny bauma Shina 2016 ny Mandroso mankany amin'ny izao tontolo izao avy eto ka sanatria mafy heriny ny "Vita avy any Shina"!
Mitete US A LINE!